Faahfaahino Laga Helayo Qaraxyo Iyo Duqeymo Ka Dhacay Muqdisho. – Calamada.com
Faahfaahino Laga Helayo Qaraxyo Iyo Duqeymo Ka Dhacay Muqdisho.
calamada April 16, 2017 2 min read
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo iyo duqeyman xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo lala beegsaday xarumo iyo maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada Federaalka.
Mid ka mid ah weerarada oo ahaa duqeyn ayaa lagu bartilmaameedsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, halkaas oo mujaahidiinta ay ku garaaceen gantaallo dhowr ah.
Saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa noo xaqiijiyey in ugu yaraan afar gantaal lagu dhuftay garoonka, kuwaas oo geystay qasaare nafeed iyo burbur hantiyadeed.
Weerarkaas ka dib, Maleeshiyaat ka tirsan murtadiinta ayaa ku soo faafay xaafadaha degmada Wadajir si ay baaritaano kaga fuliyaan halkaas balse inta aysan soo gaarin goobihii ay ku soo jeedeen ayey weerar xoogan kala kulmeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo halkaas ku diyaarsanaa.
Saraakiisha mujaahidiinta ayaa noo sheegay in maleeshiyaatka lala eegtay qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, ka dibna uu xigay weerar toos ah oo mujaahidiintu ay ku beegsadeen kolonyadooda.
Ugu yaraan 7 askari oo ka tirsan maleeshiyaatka Ashahaada la dirirka ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay dagaalkaas, sidoo kalena lagu dhaawacay tiro intaas ka badan. Saraakiishu waxay noo sheegeen in maleeshiyaatka ugu badan ay ku dhinteen iska horimaadka goobta ka dhacay oo ahaa mid aad u xoogan.
Dhanka kale, Qarax loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa barqanimadii maanta lala eegtay gaadiid ay la socdeen Saraakiil iyo shaqaale ka tirsan gaalada QM oo marayey meel u dhow deegaanka KM-13 ee duleedka magaalada Muqdisho.
Gaadiidkan ayaa ka koobnaa Laba gaari oo nooca raaxada ah oo ay la socdeen Saraakiisha iyo laba gaari oo qooqan ah oo ay saarnaayeen maleeshiyaatkii ilaalada u ahaa Saraakiisha, Waxaana qaraxa si gaar ah u beegsaday mid ka mid ah gaadiidkii ay la socdeen maleeshiyaatka murtadiinta.
Ilo Wareedyo ayaa noo xaqiijiyey in gaariga ay la socdeen maleeshiyaatka uu meesha ku burburay,Askartii saarnaana ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen goobta.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 19-07-1438 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 19-07-1438 Hijri.